Iindaba -I-graphite electrode CN iindaba ezimfutshane
Kwisiqingatha sokuqala se-2019, imakethi ye-graphite electrode yasekhaya ibonakalise imeko yokunyuka kwamaxabiso kunye nokuwa. Ukususela ngoJanuwari ukuya kuJuni, imveliso ye-18 ye-graphite electrode eyenziweyo e-China yayiziitoni ezingama-322,200, inyuke ngama-30.2% ngonyaka-ngonyaka; Ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kwe China i-graphite electrode yayiziitoni ezili-171,700, inyuke ngama-22.2% kwinyanga ephelileyo.
Kwimeko yokwehla okubukhali kumaxabiso asekhaya, wonke umntu usete izinto zakhe kwimakethi yokuthumela ngaphandle. Ukusuka kwixabiso eliphakathi lokuthumela ngaphandle i-graphite electrode ukusuka kuJanuwari ukuya kuJuni, kuyabonakala ukuba nangona imeko iyonke iphantsi, eyona ntlambo iphantsi yavela ngo-Epreli, nge-6.24 yeedola. / kg, kodwa isephezulu kunexabiso eliphakathi lasekhaya ngexesha elifanayo.
Ngokomyinge, umyinge wokuthumela ngaphandle umthamo we-elektroniki ze-graphite zasekhaya ukusuka kuJanuwari ukuya kuJuni 2019 iphezulu kunale minyaka mithathu idlulileyo. Ngokukodwa kulo nyaka, ukonyuka kwevolumu yokuthumela ngaphandle kucacile. Kuyabonakala ukuba ukuthunyelwa kwee-electrode ze-graphite zaseTshayina kwiimarike zaphesheya kuye kwanda kule minyaka mibini idlulileyo.
Ngokwembono yamazwe athumela kwamanye amazwe, iMalaysia, iTurkey neRussia yaba ngabathumeli abathathu abaphezulu kumazwe ukususela ngoJanuwari ukuya kuJuni 2019, kulandele i-India, i-Oman, iSouth Korea ne-Itali.
Kwisiqingatha sesibini sonyaka, ngokunyuka kokunikezelwa kwee-electrode ze-graphite ezinkulu zasekhaya, inqanaba lexabiso langoku lisaza kuvavanywa, kwaye ukhuphiswano lweemveliso zehlabathi luya kunyuka ngokufanelekileyo. Kuqikelelwa ukuba ukuthunyelwa ngaphandle kwe-graphite electrode yase China kuyonyuka malunga ne-25% ngo-2019.